Akụkọ ilzọ Railway | RayHaber | raillynews
Akụkọ sitere na City
Egbọ elu ESHOT, Metro na TCDD-İzmir na-enye ọrụ njem ụgbọ ala ọha maka ndị ọrụ aka ọrụ na ndị ọrụ ọha na eze na May 30-31, dịka mkpebi ndị Onye isi ala kpebiri n'ime oke ọgụ megide coronavirus. [More ...]
Dika mkpebi nke Ankara Governorship General Sanitary Board nke emere ụbọchị 19 na ọnụ ọgụgụ 30/31, n'agbata 2020-29.05.2020 Mee 2020, ebe a ga-etinye mmachi n'oge n'etiti usoro ndị aga-agha megide coronavirus (Covid-39). [More ...]
Onye isi oche nke TCDD Enterprise kọrọ na a ga-eme spraying n'etiti ọdụ ụgbọ Sivas-Kayseri n'ime oke ọgụ igbo. Dabere na nkwupụta gọọmentị mere site na General Directorate of Turkish State Railways (TCDD) Enterprise, 01 June 2020 - 05 [More ...]
1915 wersanakkale Bridge si ụlọ nchara nke 318 m
Sistem Urban Rail
Dabere na mkpebi nke ndị isi oche kpebiri na oke nke ọgụ megide coronavirus, a ga-atụba iwu na Izmir na Mee 30-31, ọrụ ụgbọ njem ọha maka ndị otu ọkachamara na ndị ọrụ ọha na eze. [More ...]
Ngwunye ụgbọ elu nke Intercity
Ejiri nlezianya Kovid-19 na ụgbọ okporo ígwè njem!
Onye na-ahụ maka ụgbọ njem na akụrụngwa Adil Karaismailoğlu mere nkwupụta maka mgbasa ozi na Lapseki, ebe ọ gara maka emume ịtinye ngọngọ ikpeazụ na nchara ụlọ elu Çanakkale Bosphorus Bridge. Ozi nke oge ọhụrụ [More ...]
Steam locomotives bụ uhere a na -akpata ụgbọ ala. Ejiri ụgbọ ala Steam site na etiti narị afọ nke 19 ruo n'etiti narị afọ nke iri abụọ. Locomotives n'ụgbọ agha, nke malitere iji ya na Germany n'etiti afọ 20 [More ...]
Loglọ ọrụ akụrụngwa nke Mars gụnyere ịrụ ụgbọ ala mbụ nke Marmaray n'ọdụ ụgbọ mmiri na Mee 15 na Turkey. Mụ na Marmaray, ụgbọ mbupụ ụgbọ mmiri mbụ rutere Duisburg, Germany. 19 [More ...]
Onye isi ụgbọ okporo ígwè Syria bụ Necip El Fares kwuru na pasent 90 nke ụzọ ụgbọ ala dị n’agbata Aleppo na Damaskọs, nke ndị agha ahụ bibiri, rụziri ọrụ, ka ọnwa abụọ gachara. [More ...]
Ala nke Ugbo Ala kwesiri ighaputa nri na ume ya choro ya ma ejiri ya n’igwe oyuyo na ihe eji eme ka ugbo dochie ya. Firmlọ ọrụ Italiantali ụlọ Stefano Boeri Architetti, Mexico [More ...]
Ndị otu ụlọ ọrụ Lighthouse, aha ndị uwe ojii 2017 dị afọ pụrụ iche Ahmet Alp Taşdemir, bụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe ndị otu PKK na Diyarbakır na 26 mepere na Somalia. [More ...]
Ndị otu ụlọ ọrụ Australia, nke ụlọ ọrụ U.S. Boeing na-eduzi, rụzuru ụdị ọrụ nchekwa mbụ nke Loyal Wingman Unmanned Fighter Aircraft (UCAV) ma gosipụtara ya ndị Australian Air Force. Onye Australia nwere Boeing [More ...]
Nkeji Ikpeazu: A Ga-enwe Curlọ Na obodo 15 na ngwụcha izu: Mịnịstrị nke ime ụlọ kerịrị nkọwapụta oge ọ ga-adị na Satọdee na Sọnde, Mee 14-30, 31 n’obodo 2020 mepere emepe na Zonguldak. Onye isi ulo oru mebere ya [More ...]
Nkeji Ikpeazu: E wepụrụ ụfọdụ usoro Coronary: Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta dị mkpa mgbe ọgbakọ ndị isi gachara. Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kesara ozi ndị a banyere mkpebi ọhụrụ e mere banyere ntiwapụ nke ọrịa Coronavirus: Mmachi nke njem njem Intercity 1 [More ...]
Ihe omuma okporo ụzọ: North America Railway Summit - Montreal
Ntinye Njikọ Railway na Sabiha Gökçen na Atatürk ọdụ ụgbọ elu Demiryolu
The Chinese na-kpuchie site Railway Labor Union Agreement nke 7 puku 18 kilomita na Turkey ...
Kars - Susuz - Dilucu - Nakhchivan Railway Project Maka usoro okporo ụzọ…